News - Usoro Flow nke High Frequency welded Pipe Unit
Nnukwu oge a na-agbanye ọkụ dị iche iche na-agụnye uncoiler, igwe kwụ ọtọ, igwe na-arụsi ọrụ ike, welder welder, nchekwa aka na-adị ndụ, na-akpụ igwe igwe, na-efegharị ikuku na-efegharị, igwe na-egwe ọka, igwe na-arụ ọrụ igwe, na-atụgharị ala, ihe nchọpụta na-enweghị ntụpọ, baler , Ugboro ugboro DC na-adọkpụ, ngwa eletriki zuru ezu, wdg. Njirimara nke nnukwu welded pipe unit bụ: nnukwu ịgbado ọkụ ọsọ, obere ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-emetụta mpaghara, ịgbado ọkụ na workpiece enweghị ike kpochara, welding mkpa mgbidi, ọkpọ weldable ọkpọkọ.
Usoro ihe eji eme ka igwe na-ekpo ọkụ na-adabere na ngwaahịa dịgasị iche iche, site na akụrụngwa iji rụchaa ngwaahịa kwesịrị ịgafe usoro usoro iji mezue usoro ndị a chọrọ ọtụtụ igwe na akụrụngwa na ịgbado ọkụ, njikwa eletriki, ngwaọrụ nyocha, ndị a ngwaọrụ na akụrụngwa dịka usoro usoro dị iche iche si dị nwee usoro ezi uche dị iche iche, mgbatị a na-agbanye mgbatị dị elu: usoro ịkwa akwa - ikpu ekpu - eriri eriri - isi na ọdụ ọdụ - ịgbado ọkụ butt - nchekwa aka nchekwa - akpụ - ịgbado ọkụ - nkwụsị mwepụ - ikpo ọkụ - nchọpụta ntụpọ - ịkpụ ufe - nyocha izizi - ịgbatị ọkpọkọ - nhazi akụkụ anwụrụ - ule hydraulic - nchọpụta na - emebi - mbipụta na mkpuchi - ngwaahịa ndị emechara.
Were igwe eji achọ mma dị ka ihe atụ, usoro mmepụta ngwa ọrụ gụnyere gụnyere akụkụ ndị a.
1. Loading: site na loading ogbe ga-etinye iji na ígwè warara, site na moto ike traction nnyefe ígwè warara na-akpụ ngalaba, n'ụzọ nile ịga n'ihu.
2. akpụ ngalaba: ewepụghị nchara warara site mpịakọta anwụ extrusion ịkpụzi, mmalite nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ prototype.
3. gbado ọkụ ngalaba: n'ọnụ ọnụ abụọ nke ígwè warara akpọrepu, site na ịgbado ọkụ igwe elu okpomọkụ ịgbado ọkụ, mara dị ka igwe anaghị agba nchara anwụrụ weld.
4. egweri ngalaba: elu okpomọkụ ala nke igwe anaghị agba nchara tube site na mmiri jụrụ ịgbado ọkụ, egweri igwe anaghị agba nchara tube weld akpọ ụkwụ, melite flatness nke weld onuete.
5. Sizing na ịgbatị: na roundness nke igwe anaghị agba nchara tube mbanye ogo site ịgbado ọkụ elu okpomọkụ na mmiri jụrụ ga-enwe a nta deformation. Sizing na ịgbatị site rollers, mkpebi siri ike nke gburugburu ma ọ bụ squareness nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ.
6. sectioncha ngalaba: site na mma ncha ihu ọnwụ ma ọ bụ haịdrọlik ọnwụ, dị ka mkpa n'ezie nke onye ọrụ anwụrụ ogologo nwere ọgụgụ isi ọnwụ anwụrụ.
7. Cinder ihe: site n’okpuru ihe onwunwe ulo, ọ dịghị mmebi ọ bụla nsogbu na-etinye ọkara okokụre ngwaahịa.
8. Polishing: ọkara okokụre ngwaahịa na-gaa igwe anaghị agba nchara anwụrụ polishing ígwè maka okokụre ngwaahịa elu nkwakọ engineering amụcha.
9. Nkwakọ ngwaahịa: ngwaahịa na-egbuke egbuke nke kristal eji achọ mma site na igwe nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa maka mbupu.
Ghọta isi ihe 9 ndị a, gbasara usoro anaghị arụ ọrụ igwe anaghị ata nchara. Ezigbo mmanya anaghị achọ oke ohia, kamakwa iji usoro ziri ezi, yana ịchọta ezigbo onye nrụpụta iji nwee otu ntụzi-aka otu.